Amapolisa kunye nababhali. Amagama ama-4 okwazi | Uncwadi lwangoku
Amapolisa kunye nababhali. 4 amagama owaziyo
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
Amapolisa. Babekhona okanye basenjalo kwaye ngenye imini bashiye i-plaque, izitrato kunye ne-scoundrels kwaye baqala ukubhala malunga nabo, malunga nehlabathi labo. Zininzi ngaphezulu, kodwa namhlanje sihlala nala Amagama angama-4. Zivela iwonga lehlabathi, abaphumelele iimbasa ezibalulekileyo, ngamabali neencwadi zempumelelo eziguqulelwe kwiilwimi ezininzi.
ZiBritish UClare Mackintosh, isiFrentshi UOlivier Norek kunye nabantu baseBarcelona UMfundisi kaMarc y UVictor woMthi. Ezi zihloko zakhe zokugqibela ezipapashiweyo. Le isuka eDel Arbol izakuphuma ngoSeptemba 19. Ke masiqwalasele ukuba babengoobani kwaye bangobani.
1 UClare Mackintosh
2 UOlivier Norek
3 UMfundisi kaMarc
4 UVictor woMthi
Eli bhinqa lesiNgesi laseBristol umsebenzi iminyaka elishumi elinambini emapoliseni, kwisebe le uphando lolwaphulo-mthetho, njengomphathi. Wayishiya ngo-2011 esiya kuba yintatheli wezifanekiso kunye nomcebisi kwimidiya yoluntu. Inoveli yakhe yokuqala yayi Ndikuyekile uhambe, ekhawulezileyo ibaluleke kakhulu kwaye ithengisa kakhulu. Kwaye ngesi sihloko sitsha, ndikubukela, ndibuyele ku yovuyo lwengqondo.
Isiqendu. Kususela kubusuku nemini ubukho be UJenna ngwevu ajike abe liphupha elibi. Umnqweno wakho kuphela ngoku baleka ukuqala ubomi obutsha kude nayo yonke into. Iphela ifikelela Welsh apho arenta khona indlu encinci enethemba lokufumana indlela yokulibala apho.
Kancinci kancinci uJenna uya kuqala ukubona a elizayo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ajongane noloyiko lwakhe, usizi olukhulu kunye nenkumbulo yobusuku obumnyama bukaNovemba obabuguqula ubomi bakhe ngonaphakade.
Kwaye akukho mntu unokubaleka kwixesha lakhe elidlulileyo kwaye kwimeko kaJenna elidlulileyo liza kubuya.
Uzalelwe ngaphakathi elixhonywayo, le ndoda ingumFrentshi ineminyaka engama-42 ibigqibile ngoFebruwari kwi-BCNegra ibonisa Isiphumo seDomino. Le ncwadi i Ibhaso lenoveli lika-2016 kwaye oko kummise njengelinye lamagama amakhulu kwindawo emnyama eFrance.
Umyili weCaptain UVictor Coste, i-ego yakhe eguqukayo, uNorek wayenjalo amapolisa iminyaka eli-15 kwi Isithili saseSeine-Saint-Denis, indawo yaseParis enezinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho, intswela-ngqesho kunye nokufudukela kwelinye ilizwe. Kwiminyaka embalwa edlulileyo ucele i mka Waqala ke ukubhala. Isiphumo seDomino yimeko yesithathu kaCoste.
Isiqendu. Kuba imprudence umfana UNano Mosconi iphela ngo intolongo NguMarveil. Esoyika kwaye etyhafile, ucela udadewabo uAlex ukuba enze nantoni na ukuze amkhuphe apho. Ubeka uxinzelelo kwigqwetha losapho, eliphakamisa isicwangciso esimangalisayo esinokusebenza.
Ngeli xesha, kwicandelwana lamapolisa ezomthetho eSebe laseSena-Saint-Denis, eyaziwa njenge SDPJ93, UCaptain Victor Coste kunye neqela lakhe bafumana isaziso sokuxhwilwa kwenkwenkwana.
Amatyala amabini abonakala engadibaniyo aya kukhupha isiphumo sedomino ngeziphumo ezingalindelekanga.
Ulwaphulo-mthetho kunye nomlobi waseCatalan, uMfundisi usebenzela amapolisa enzululwazi eMossos d'Esquadra. Ukusukela ngo-Matshi walo nyaka ebesesitalatweni Farishta, inoveli yakhe yesihlanu kunye Inxalenye yesibini yento ebizwa ngokuba yi "trilogy yeziqithi" isihloko sayo sokuqala Bioko.
Kwakhona ngo-Matshi siyibonile kwi IKosmopolis Ukwabelana ngokuthetha ngombhali nombhali kunye nokuzithemba noJo Nesbo.
Isiqendu. UFarishta ligama lentombazana Inkedama yase-Afghan, ukuba emva kokuphulukana nabazali abamamkelayo kwaye sele efikisa, waya kusebenza kuhlobo lokhenketho kwezinye iziqithi zaseFrench Polynesia. Apho ukhathalela iintsapho ezihlala kwisiqithi esincinci.
Ngelo xesha uhlala ibali lothando Kunye nesikhokelo sobunzima, kwaye uzame ukufumana iimfihlakalo ezibanjwe yindawo leyo. Kutheni le nto ezi ntsapho zihlala apho, zinqanyulwe kwihlabathi? Kwenzeka ntoni kumantombazana awayekade eposti yakho ngaphambili? Konke ngelixa umntu ebamba.
Ngokunokwenzeka lelona gama laziwayo kwaba bane. Le yangaphambili i-mosso d'esquadra inekhondo elinempumelelo njengombhali Usizi lwamaSamamura, Isigidi sehla okanye ophumeleleyo kwiNadal Prize 2016, Ubusuku phantse yonke into.
UDel Arbol uzakukhupha inoveli entsha ngoSeptemba, Ngaphezulu kwemvula, kwaye yena ngokwakhe wayephethe uxanduva lokumemezela kwiprofayili yakhe ye-Facebook. Ke, chaza le ncwadi intsha njenge
unayo inoveli malunga nokuba kuthetha ntoni ukuphila.
Okanye wathi emlonyeni kaMiguel, ophambili kuyea: "Sichitha ixesha elininzi sisebenza ukuze siphile kangangokuba silibale ukuphila."
Ewe, siza kubona ukuba leliphi ibali elitsha elisothusayo, nangona ngokuqinisekileyo isitayile sakhe, esine-nuanced kwaye simile, ngekhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Amapolisa kunye nababhali. 4 amagama owaziyo
Ngale mini kuzelwe uJohanna Spyri, umdali kaHeidi
Ukuqokelelwa kwemibongo "Nangona kubuhlungu" nguTyler Knott ngoku kuyathengiswa